मिति ः २०७४ बैशाख ७
१. निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र अन्य सम्बन्ध निकाय वा संस्थाहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छन् । कतिपय कामहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । घोषित भएका उमेदवारहरु र राजनीतिक दल चुनावी प्रचारको मैदानमा छन् । यता सरकारले मधेशी मोर्चास“ग संविधान संशोधन गरी उनीहरुलाई निर्वाचनमा सामेल गराउने भनी वार्ता गरिरहने र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा व्यवस्था र निर्वाचनबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अन्यौल खडा गरिदिएका छन् । सरकार र मन्त्रीहरुका त्यस प्रकारका कार्यहरुले निर्वाचनलाई मद्दत गर्दैनन् । हामीले सरकारलाई निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न र त्यस कार्यमै केन्द्रीत हुन विशेष आग्रह गर्दछौं ।
२. तराई–मधेशका जनता र मधेशीवादी अलग अलग कुरा हुन् । तराईका मधेशी, थारु जाति, उत्पीडित तथा निम्न वर्गका तराईवासी जनताहरु नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध छन् । उनीहरुमा उच्चप्रकारको देशभक्तिको भावना छ । वास्तवमा उनीहरुका जायज मागहरु पूरा गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ । हामीले उनीहरुप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौं । तर मधेशीवादी भन्नाले भारतीय निर्देशनमा नेपालमा काम गर्ने पृथकतावादी हुन् र उनीहरुको उद्देश्य नेपाललाई विखण्डन गर्न लक्षित छ । सरकारले उनीहरुसित सम्झौता या सहमति गर्न व्यर्थको प्रयास गरिरहेको छ । मधेशवादीहरुको उद्देश्य पूरा नहु“दासम्म उनीहरुसित गरिने सम्झौता वा सहमति उनीहरुका लागि पनि कुनै महत्व हु“दैन । प्रचण्ड सरकारले दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर अहिले पुनः संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयक पनि राष्ट्रघाति नै छ । त्यसलाई हामीले घोर विरोध गर्दछौं । यसमा स्वयं मधेशवादी सन्तुष्ट भएका छैनन् । उनीहरुले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरिसकेका छन् । यो स्थितिमा सरकार व्यर्थको कार्यमा अल्झिएको छ । त्यसले निर्वाचनको कार्यलाई बाधा पर्दछ ।
हाम्रो यो स्पष्ट भनाई छ कि मधेशवादीहरुले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अर्थात् तराईलाई विखण्डन नगरेसम्म कहीं रोकिन्नन् । त्यसकारण, संविधान संशोधन गरेपछि वा उनीहरु सन्तुष्ट भएपछि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने हो भने त्यस्तो चुनाव कहिल्यै हु“दैन । संविधान कार्यान्वयन पनि हु“दैन । संविधान कार्यान्वयन नहु“दा महान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु समाप्त हुन सक्दछन् । यस बारेमा पनि हामीले सरकार र तराई मधेशी जनताको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौं ।
३. काभ्रे जिल्ला अदालतले करिब १४ वर्षपछि भए पनि मैना सुनुवार काण्डमा सेनाका अधिकारीहरुका विरुद्ध गरेको फैसलालाई हामीले सही ठान्दछौं । सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगद्वारा द्वन्द्वकालिन मुद्दाबारे सही न्याय हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ । किनकी, त्यस सम्बन्धी कानुन अपराध अनुसार सजाय हुने भन्दा पनि दोषीलाई माफी दिने प्रकारले तयार गरिएका छन् । यो स्थितिमा आयोगको उपयोगिता कम छ । हामीले ती सबै मुद्दाहरु अदालतद्वारा नै फैसला होस् भन्ने चाहन्छौं ।